Hichapụ akaụntụ gị njirimara ngwa ngwa ekele Deseat.me | Akụkọ akụrụngwa
Deletebọchị ihichapụ akaụntụ gị ngwa ngwa ekele Deseat.me
Ole na ole bụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ dijitalụ ndị na-adịghị esi ọnwụ na anyị ga-edebanye aha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji usoro ha, nke ahụ bụ na data anyị bụ ezigbo ọla edo. Nọmalị, anyị na-eji akaụntụ email anyị oge niile ịdebanye aha na saịtị ndị a, anyị nọ na oge Gmail. Ka ọ were, N'ihi ngwa weebụ a, anyị ga-enwe ike ihichapụ akaụntụ ndị ọrụ anyị debanyere aha na Gmail na obere usoro, na-enweghị nsogbu. Ka anyị lebakwuo anya na Deseat.me, ihe na-egosi na ndị ọrụ na-agwụ ike nke spam site na email na obere usoro iji dozie ya.
Ọ bụghị ihe ọhụụ na anyị efuola akaụntụ niile nke weebụsaịtị ndị anyị debanyere aha, n'eziokwu, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ọ gaghịzi adị, yabụ data anyị abanyela ga-erere na onye na-ere ahịa kachasị elu. Ngwa weebụ a (nke ụmụ okorobịa gosipụtara site na Microsiervos) ga-enye anyị ndepụta nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ndị anyị debanyere aha anyị site na iji akaụntụ Gmail anyị, ma otu a, anyị nwere ike ịhọrọ otu n’otu n’enweghị nsogbu nke ndị anyị na-anaghịzi eji ma ọ bụ oge iji tufuo ha.
N'ezie, ịbanye Deseat.me, n'ụzọ dị ịtụnanya, anyị ga-edebanyekwa aha na akaụntụ Google anyị, mana anyị ga-enye ya ntuli aka nke obi ike maka ọrụ ọ ga-arụ yana n'ihi na ọ chọrọ ikikere ndị ọrụ ole na ole. O doro anya, ngwa ahụ na-enyocha igbe akwụkwọ ozi anyị ma gosipụta ndepụta weebụsaịtị ebe ọ ga-enye iji wepu aha. Ugbu a, anyị nwere ike ịhọrọ onye n'ime ha ga-apụ na email anyị wee pịa "hichapụ" ga-eduzi anyị kpọmkwem ebe anyị nwere ike ihichapụ akaụntụ anyị. Ma enwere ọrụ ndị ọ na-esighi mfe ihichapụ akaụntụ ahụ, dị ka Spotify.
Nweta ọrụ nri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Deletebọchị ihichapụ akaụntụ gị ngwa ngwa ekele Deseat.me
Google zụtara Cronologics iji mee ka Wear gam akporo dịghachi
Galaxy S8 agaghị ada n'ahịa dị na mpempe akwụkwọ